၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 9/19/10 - 9/26/10
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကိုဝိုင်း | မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွင်း နအဖတပ်များ ဝင်လာလျှင် ပစ်ခတ်ရန် အမိန့်ပေးထားကြောင်း မွန်စစ်ရေး အကြံပေး ဗိုလ်မှူးကြီး ကောင်းရွတ် (ငြိမ်း)က ပြောသည်။
Posted by နော်မန် at 10:52 PM
Please sponsor my bungee jump for Burma’s political prisoners
On Saturday 16th October 2010 at the O2 Arena in London I am doinga160 feet bungee. I am scared of heights and I am fearful about the jump.
My father is in jail for trying to get freedom and democracy for his people. He was arrested over three years ago, at the start of the democracy uprising, which became known as the “Saffron Revolution”. He is servinga65 year prison sentence because he wants what you and I want - democracy and freedom in Burma.
My father, Mya Aye
That is why I am telling you my story and need to ask you to please to sponsor my jump for the Burma Campaign UK.
source by :http://www.bmycharity.com
NEJ | မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများ၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် နိုင်ငံတကာမှ ထောက်ခံပြောဆိုမှုများ တိုးပွားလာနေချိန်တွင် ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တခုမှနေ၍ နအဖစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား နိုင်ငံသားများအပေါ် သေဒဏ်အတည်ပြုမပေးသည့် ကရုဏာကြီးမားသူ တဦးအဖြစ် ချီးမွမ်းရေးသားထားသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၇) ရက်ထုတ် အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၃)၊ လျှပ်တစ်ပြက် သတင်းဂျာနယ်ပါ မြတ်ခိုင်၏ တရားရှာထောင်မှာတွေ့ ဟူသည့် သတင်းဆောင်းပါးတွင် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်၏ ပြောစကားကို ကိုးကား၍ ရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်မှူးချုပ်က “ဒါတွေသည် နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲရဲ့စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ။ ဒါတွေနဲ့ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိတောင် စောင့်ရှောက် ထားတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့၊ ထောင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရတဲ့ အကျဉ်းသားပေါင်း (၆ဝဝ) ကျော်ရှိပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ၀န်ထမ်းများပင်လျှင် ကြိုးပေးသတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မကြားဝံ့သူများ အများကြီးရှိနေပြီး ကြိုးပေးသတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသည့်လူ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဟုလည်း ၎င်းက ပြောဆိုထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ စစ်တပ်မှ ပစ်သတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြန်မာသံရုံးတွင် သံမှူးကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများသို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
လျှစ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ကမူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ကိုယ့်နိုင်ငံသားများ၊ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် သနားကရုဏာ ကြီးမားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကြိုးပေးချမှတ်သည့်သေဒဏ် မရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးရန်အတွက် ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာ (၂၃) တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံက ထောက်ခံလိုက်သဖြင့် ယင်းအဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံသည့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံ ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရန် အဓိက အဆိုပြုတိုက်တွန်းခဲ့သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လူအခွင့်အရေးအခြေအနေများကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်နောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမဆန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂက စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by နော်မန် at 1:28 PM
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | နအဖဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ၉၇/၂၀၁၀ ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး သဘောနဲ့ပြောရရင် ဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတဲ့ လုပ်ရပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ န၀တ-နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် တလျှောက်လုံး ကြံစည်နေတာကို အပြတ်အကောင်အထည်ဖော်ချလိုက်တာလို့ ပြောရမှာပါ။ သာမန်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းကစပြီး လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု အများဆုံးရနေတယ်လို့ ဆိုရမယ့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတရပ်ကို အာဏာနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နအဖရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလောကကို ထူးထူးခြားခြား မရိုက်ခတ်ခဲ့ပါဘူး။
အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ တခုက နအဖဟာ အနှေးနဲ့ အမြန်ဆိုသလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတာ အားလုံးက တွက်ထားပြီးသား ဖြစ်လို့ပါ။ နောက်တခုကတော့ ဒါဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အလဲထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဒီအထဲက နည်းနာရှာပြီး ပြန်ရုန်းထလာမှာပဲလို့ လူထုတွေက မျှော်လင့်နေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖ ဘယ်လိုပဲ မောက်မာ-မောက်မာ သူတို့အင်မတန်ဝါကြွားလှတဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို တပြည်လုံးမှာ မကျင်းပ နိုင်ကြောင်းကိုတော့ သူတို့ဝန်ခံလိုက်ရပါပြီ။ အဲဒါက အပစ်ရပ်ဒေသတွေမှာပါ။ သူတို့ မနိုင်နိုင်ဘူး သေချာတဲ့နေရာတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာ ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ရင်လည်းနိုင်ရမယ်၊ မနိုင်ရင်လည်း နိုင်ရမယ်လို့ လုပ်မရတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ဒီလိုပဲဖျက်သိမ်းမှာပါ။
ဘာပဲပြောပြော ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ ကြပ်လေ၊ ကြမ်းလေ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း ရှင်းသထက်ရှင်းလင်းစွာ သရုပ်ပေါ်လာပါပြီ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အပြတ်ကိုင်ပြလိုက်တာဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးယဉ်လို့မရကြောင်း အားလုံးကိုထပ်ပြီး သတိပေးနေတာပါ။ ဒီချုပ်လို ဆန့်ကျင်သူတွေ အတွက် စစ်အာဏာရှင်တွေ ပေးသနားတဲ့ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီထဲမှာ စပေ့စ်လုံးဝမရှိကြောင်း ပြသလိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဦးတူးဂျာတို့ကို ပါတီအနေနဲ့ရော လူတဦးချင်းအနေနဲ့ပါ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့်မပေးတာဟာလည်း အပစ်ရပ် အဖွဲ့ဆိုတာတွေကို နအဖအပေါ် စိတ်ကူးမယဉ်ကြဖို့ သတိပေးလိုက်တာပါပဲ။ နအဖဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ တချိန်မှာ သမိုင်းနဲ့ချည် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေ ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဒီလောက်တောင် ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ နအဖကိုယ်စား သဘောတရားဆရာကြီး လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တာဟာ နိုင်ငံရေး သူငယ်နာမစင်တာလို့ ရေးသားနေတာကို တွေ့ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက အိမ်နီးနားချင်းက နိုင်ငံကြီးတွေကိုသွားပြီး မျက်နှာချိုသွေးနေတာနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မွေးထားခဲ့တဲ့ အီးလစ် (elite) ဆိုတဲ့ လူတွေကလည်း နအဖအတွက် ကမ္ဘာလှည့် ကြော်ငြာမောင်းခတ်နေကြပါတယ်။ ပညာတတ်ဖောက်ပြန်တော့ သူများထက် ကဲတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလူတွေဟာ “နအဖကို ဆန့်ကျင်နေမယ့်အစား ကျနော်တို့နဲ့ လာဆွေးနွေးလှည့်စမ်းပါ” ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးတွေလည်း လျှောက်ပြောနေကြပါတယ်။ အားနာစွာနဲ့ ပြောရရင် ဒီလိုပြောနည်းဟာ အင်တန်စော်ကားတာပါ။ နအဖဟာ ဘယ်သူနဲ့မှမဆွေးနွေးဘဲ အကြမ်းကိုင်နေတာကိုတော့ ဘာမှမပြောဘဲ နအဖက လိုက်ဖမ်း-လိုက်သတ်လို့ ရှောင်ထွက်လာရတဲ့လူတွေကို သူတို့က နားချပြမယ်လို့ ဆိုနေတာပါ။ သူတို့အပြောဟာ နအဖကို နာကြည်းစွာ ဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုမှ ဆွဲဆောင်လို့မရဘူးဆိုတာ သူတို့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲကပဲ သူတို့တတွေ ဒါမျိုးတွေ လျှောက်ပြောနေတာဟာ သူတို့ကို ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒိုနာတွေ (donor) နဲ့ နအဖကို သိစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်မရအဖတ်မရ၊ သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ ၀ါဒဖြန့်ဖို့လောက်သာ အဖြေပေါ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြည်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာဟာ အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ အခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်တယ်ဆိုတော့ရော၊ ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာမလဲ။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို နအဖက ဘာလို့လုပ်စေခဲ့တာလဲ။ တင်းမာမှုတွေ လျော့ပါးစေရေးအတွက်လား၊ အမျိုးသားသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ရေးအတွက်လား။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့က တခါမှ ရေရေရာရာမပြောခဲ့ပါဘူး။ စကတည်းက ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့ လှည့်စားဖို့သာဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဟာ အဲဒီအဆင့်ကိုကျော်လို့ “ရွေးကောက်ပွဲ” အနားကပ်လာတယ်ဆိုတော့ နအဖက လုပ်နေတာတွေကြောင့် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ လျော့ပါးစေမယ့် လက္ခဏာတွေ ပေါ်ထွက်လာပါသလား။ အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် အားတက်စရာတွေ ပိုတွေ့လာရပါသလား။ အဖြေက ပြောင်းပြန်ပါ။
ဒီကာလထဲမှာပဲ တိုက်ဆိုင်လို့ပဲလား၊ တမင်ပဲလားမသိ၊ ပဲခူးမြို့ထဲမှာ အရပ်သား လူငယ် (၂) ယောက်ကို စစ်သားတွေက တမင်တကာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီး တွေ့သမျှလူကို စိမ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးမှောင်တဲ့ညမှာ ငှက်ဆိုးထိုးသံ ကြားလိုက်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ နအဖက သူ့ လူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ်ကို ပြောင်ကာကွယ် ပြောဆိုသွားသလို နအဖရဲ့ ဒီမိုကရေစီအောက်က မီဒီယာများကလည်း ပြောင်ပဲ နှုတ်ပိတ်၊ လက်ဆွံ့ နေပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နအဖလုပ်နေတာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်ထွက်လာမယ့်အစိုးရဟာ ပိုပျော့ပျောင်းမယ်၊ မတူတဲ့လူတွေနဲ့ အပေးအယူတွေ ပိုလုပ်လာမယ်လို့ ယူဆစရာရှိပါသလား။ နိုင်ငံရေးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တော့ တင်ခွင့်ပေးပါရဲ့။ သူတို့မကြိုက်တာကို မပြောရ၊ မရေးရ၊ မလုပ်ရဆိုလို့ကတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းရတာပဲဖြစ်မှာပါ။ အခု နအဖက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ လူတွေထဲက ဘယ်သူကများ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို စာနာသံ၊ နအဖကို မကျေနပ်သံတွေ ဖော်ပြရဲလို့လဲ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖို့ ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ပြည်သူလူထုမှတပါး အခြားအားကိုးစရာမရှိပြီဆိုတာ ပိုလို့၊ ပိုလို့ ထင်ရှားသွားပါပြီ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့၊ အကောင်အထည်မရှိတဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်တွေကို စွန့်ပစ်ပြီး လက်တွေ့အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတော့မယ်။ မကူးနိုင်ရင် မြုပ်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုထဲကို ဖြန့်ဆင်းဖို့၊ ပြည်သူလူထုကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ၀န်းရံ ထောက်ခံကြဖို့ အထူးလိုအပ်လာပါပြီ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသွင်ပြင်ဟာ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ အရိပ်အရောင်တွေ ပြနေပါတယ်။ အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းတာဖြစ်မလား၊ အဆိုးဘက်ကို ပြောင်းတာဖြစ်မလား ဆိုတာကတော့ ပါဝင်သူတွေအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား နေသော ကျောင်းသား လူငယ် အင်အားစု များ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၏ တတိယမြောက် လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် LETTER CAMPAIGN လှုပ်ရှားမှုကို လွန်ခဲ့သည့် တပတ်ခန့်မှ စတင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
စစ်တပ် အသွင်ပြောင်း ပါတီ ဖြစ်သော ကြံ့ဖွတ် ပါတီနှင့် နအဖ ပြုလုပ်မည် ဆိုသော ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို သရော် လှောင်ပြောင် ထားသော ပို့စကတ်များ ထည့်ထားသည့် စာအိတ်ပေါင်း တထောင်ကျော်ကို လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်ရက်ခန့်ကတည်းက အဆိုပါ လူငယ် အင်အားစုများက ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ စာတိုက်ပုံး အသီးသီးမှ နေ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားရှိ မြို့နယ် များသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း လှုပ်ရှားမှုတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့သူ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား နေသော ကျောင်းသား လူငယ် အင်အားစုများ အဖွဲ့ဝင် လူငယ် တစ်ဦးထံမှ သိရှိ ရသည်။
စသည့် စာသားများ ပါဝင်သည့်အပြင် ဘောင်းဘီချွတ် လူဝတ် ပြောင်း၍ ကြံ့ဖွတ် ပါတီကို ဦးဆောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက် အရွေးခံရန် ပြင်ဆင် နေသော "ဦး" တပ် ခေါ်နေရသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို သရော် လှောင်ပြောင် ထားသော ကာတွန်း ပုံများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့က ဒီ LETTER CAMPAIGN လှုပ်ရှားမှုကို ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး သုံးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် လှုပ်ရှား ပြုလုပ် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေ သွေးမြေ ကျခဲ့ရတဲ့ လက်သည် တရားခံကို မမေ့ကြဖို့နဲ့ အဲဒီ သာသနာ ဖျက်တွေ ကိုယ်တိုင်က ပုံစံ ပြောင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ထပ်မံ အုပ်ချုပ်ဖို့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတဲ့ လုပ်ကြံ ဇာတ်ကြီးကို ခင်းဖို့ ကြံနေပြီ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ပြည်သူတွေ သတိပြုမိကြဖို့ အတွက် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ပြည်တွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့လို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ တခြား ညီအစ်ကိုတော် အင်အားစု တွေကို အခု ဒီ LETTER CAMPIGN လှုပ်ရှားမှု ပုံစံမျိုးလိုပဲ ကိုယ့် ရဲဘော်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကို မထိခိုက်စေပဲ အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်း ယန္တယား ဖြစ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကို အသုံးချပြီး ကိုယ့် လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ IDEA ကိုလဲ ပေးချင် ပါတယ်။ ဒီ LETTER CAMPIGN ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက်က စတင် လှုပ်ရှား ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး စာအိတ်တွေ ပေါ်က ပို့ရမယ့် လိပ်စာတွေ ကိုတော့ ရန်ကုန် လမ်းညွှန်လို စာအုပ်မျိုးနဲ့တခြား ဂျာနယ် တချို့က ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဓိကထား ပို့တာ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်က လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အစိုးရရုံး တွေကိုပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ပစ်မှတ် ကတော့ အလုပ်သမား လူတန်းစားနဲ့အောက်ခြေ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု အထက်ပါ လူငယ်က ပြောကြား သွားပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး သုံးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ပြုလုပ်တဲ့ LETTER CAMPIGN လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ် ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား နေသော ကျောင်းသား လူငယ် အင်အားစုများ သည် လွန်ခဲ့သည့် လ ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ပထမ လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက် အသီးသီးသို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ပို့စကတ်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီး၊ ဒုတိယ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ် ဆယ့်တစ်မြို့နယ်၏ လမ်းမများ ပေါ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲမပေးရေး စတစ်ကာများ ကြဲဖြန့်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး တနင်္ဂနွေလှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ယခု တတိယ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် LETTER CAMPIGN ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားနေသော ကျောင်းသား လူငယ် အင်အားစုများ
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အမှတ်(၁၄) နွယ်နီလမ်း စောရန်ပိုင် တောင် ရပ်ကွက်ရှိ အလုံမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ် နေအိမ်တွင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု များစွာဖြင့် ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် ပင့်ဖိတ် ထားသော ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ် (၅) ပါးမှ (၅)ပါး သီလပေးပြီး၊ မေတ္တာသုတ်နှင့် ဗောဇ္ဈင်သုတ် ပရိတ် တရားတော်များကို ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ် ချီးမြှင့်တော် မူခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေး ကပ်လှူပွဲ အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌကြီး ဘဘ ဦးတင်ဦး၊ ဒေါက်တာ မျိုးအောင် (NLD ရန်ကုန်တိုင်း စည်းရုံးရေးမှုး)၊ ရဲရဲတောက် ဦးသိန်းအောင်(ရွှေပြည်သာ)၊ ဦးအေး၊ ကဗျာဆရာ ဦးသူရဇ္ဈာန်၊ ကဗျာဆရာ ဦးဘုန်းကျော်နှင့် NLD ပါတီ (အင်္ဂါဝတ်ပြု ဆုတောင်း အဖွဲ့ဝင်)များ၊ မ၀င်းမော်ဦး(၈၈ ကျဆုံး)၏ အဖွား ဒေါ်နီနှင့် သူမ၏ မိသားစုဝင်များ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များ၊ ရှေ့နေကြီး ဘဘ ဦးအုန်းမောင်၊မမာမာဦးNLD ပါတီဝင်(ဗန်းမော် အကျဉ်းထောင်၌ ထောင်ကျနေသူ)၏ ဖခင်ဦးသိန်းမောင်၊ ဒေါ်ရှု NLD၊ ကျောက်တန်း မြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌနှင့် ပါတီဝင်များ၊ စမ်းချောင်း မြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသက်ဝေနှင့် ပါတီဝင်များ၊ ရှေ့နေလေး ကိုဖိုးဖြူ (အလုပ်သမား အကျိုးဆောင်)၊ ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များ၊ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း NLD အမျိုးသမီး အဖွဲ့များနှင့် အခြားသော ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက တက်ရောက် ချီးမြှင့် အားပေး ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အလုံမြို့နယ် NLD လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ်မှ တစ်ကမ္ဘာလုံး၊ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေခြင်း အတွက် ဂျိုးငှက်လေးများကို အဆုံးအဆမဲ့ ကောင်းကင်ထက်သို့ လွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်း အပြည်အပြည် ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပွဲတွင် ရဲရဲတောက် ဦးသိန်းအောင်(ရွှေပြည်သာ)က (ငြိမ်းချမ်းတေးနဲ့ ရွှေဂျိုးဖြူ ကူပါမှလေး) အမည်ရှိ ကဗျာကို လည်းကောင်း၊ ကဗျာဆရာ ဦးသူရဇ္ဈာန် က(ငြိမ်းချမ်းရေး တမန်တော်) အမည်ရ ကဗျာကို လည်းကောင်း၊ ကဗျာဆရာ ဘုန်းကျော်မှ (ပြည်သူတွေကို ညှာတာပါ) အမည်ရ ကဗျာ(၃)ပုဒ် ရွတ်ဖတ်ပြီး ဂုဏ်ပြု ခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပရခြင်း အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၄င်းပွဲကို ဦးစီး ကျင်းပ ပြုလုပ်သူ ကိုလူမော်လတ်ကို အနည်းငယ် မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
BP ။ ။ ကိုလူမော်လတ် ခင်ဗျား၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာလေး သိပါရစေ။
ကိုလူမော်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ပွဲလေးကို အကြောင်းမဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပဲ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာပြည် အတွင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ၊ နောက် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ အမေလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြကြယ်လို့ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲမြဲနေတဲ့ အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွ မြန်မာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင် တွေမှာ ဒီမိုကရေစီ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အကျဉ်းချ ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ငြိမ်းချမ်း စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ် ဆွမ်းကပ် လှူပြီး မေတ္တာပို့သ၊ အမျှ ပေးဝေ ချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့် အဖေလည်းခု ဗန်းမော် ထောင်မှာ အနှစ်(၂၀) အကျဉ်းချ ခံထားရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေက အလုံမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဌ ဦးဘမြင့်ပါ။ ခုဒီပွဲကို ကျွန်တော် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့အတွက် ကျွန်တော့် အဖေဆီတောင်၊ ထောင်ဝင်စာ သွားမတွေ့ ရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ခုလက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော် လူကြီးများကို အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆို ပါတယ်။ သူတို့တွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်း မဟုတ်၊ နိုင်ငံတော်ကို လုပ်ကြံ ကြတဲ့ သူတွေလည်း မဟုတ်ဘူး၊သူပန် သူကန် တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ဆန္ဒက ထောင်ချ ထားခံရတဲ့သူတွေ အမြန်ဆုံး ပြန်လွတ်ပြီး မိသားစုတွေနဲ့ နွေးထွေးစွာ ပြန်လည် တွေ့ဆုံစေ ဆန္ဒပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုလည်း တကွဲတပြား ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရတာကို စာနာပြီး သူတို့တွေ အတွက်၊ အားလုံး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျင်းပ ခဲ့တာပါဗျာ။
(ကိုလူမော်လတ်ဟာ သူ ရေစက် ချနေစဉ် ဘဘ ဦးတင်ဦး ရောက်လာချိန်မှာ မျက်ရည်တွေ၊ တွေတွေ ကျခဲ့သလို၊ ကျွန်တော် အင်တာဗျူးနေစဉ်မှာလည်း မျက်ရည်များ ကျခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အားလုံး အမြန် ငြိမ်းချမ်းမှု ရပါစေလို့ ကျွန်တော် ဒီနေရာကပဲ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ လိုက်ပါတယ်။)
၁၆ကြိမ်မြောက် ABMA ဂျာနယ်
Posted by နော်မန် at 2:32 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ရခိုင် ၄ မြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး လူပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်
နိရဉ္စရာ| စက်တင်္ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မြို့နယ် လေးမြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက် စာတန်း ဖြန့်ဝေသည့် လူပ်ရှားမူ တခု ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။
မောင်တောမြို့မှ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးက “စစ်တွေ၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ ကျွန်မတို့ နေထိုင်တဲ့ မောင်တောမြို့မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်တောမှာ ဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရွက်တွေကို ကပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စာရွက်တွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်ပုံနဲ့ စာတန်းတွေ ရေးထား တာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မောင်တောမြို့တွင် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ဖြန့်ဝေသော စာရွက် စာတန်းများကို အစိုးရရုံး အပြင် အုတ်နံရံများ၊ သစ်ပင်များနှင့် လျှပ်စစ် မီးတိုင်များတွင် ကပ်၍ တွေ့ရသည်ဟု သူမက ပြောသည်။
“ကပ်ထားတဲ့ စာရွက်တွေမှာ ရေးသားထားတာကတော့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့ စာတန်းတွေ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကျကျနန ရေးသားပြီး အဲဒီစာရွက် တွေကို မောင်တောမြို့ တစ်ခုလုံးမှာ ကပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု သူမက ဆက်ပြောသည်။
နံနက် ၉ နာရီ အချိန်ထိ အဆိုပါ စာရွက်များကို မောင်တော သပြေလမ်းတွင် တွေ့မြင်ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရဲနှင့် နစက တပ်ဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာပြီး စာရွက်များကို ဆုတ်ဖြဲပစ်ပြီး အချို့ကိုရဲစခန်းသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်ဟု သိရသည်။ မောင်တော အမှတ် ၄ရပ်ကွက်မှ အရပ်သား တစ်ဦးကလည်း “ခုလို စာရွက်စာတန်းတွေ မြို့တစ်ခုလုံး အနှံ့ကပ်တာကတော့ ဒါပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရွက်တွေဆိုတော့ မြို့လူထုကတော့ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မောင်တောက ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ခြင်္သေ့တံဆိပ်မှာလည်း ဆံမွေးနဲ့ မဟုတ်တော့ဘဲ မုတ်ဆိတ်မွေး ပေါက်နေတဲ့ အတွက် လူတွေက တော်တော့ကို အံ့သြနေကြပါတယ်။ ခုလို အခြေအနေမျိုးမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရွက်တွေကို မောင်တောမှာ ကပ်တော့ လူတွေက ဒီအကြောင်းကိုဘဲ ပြောနေကြတာပါဘဲ” ဟု ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက်စာတန်းများကို မြို့ အနှံ့တွင် ကပ်ထားသဖြင့် ယခုအခါ အာဏာပိုင်များက အဆိုပါ စာများကပ်ထားသူများကို အပူတပြင်း လိုက်လံ စုံစမ်း ရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
RFA | ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့မှာ စစ်တပ်က ထွက်ပြေးသူ တပ်သားတဦးကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထားစဉ် သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်သား သေဆုံးကြောင်း စစ်တပ်က အကြောင်းကြားလာတဲ့ အတွက် အခုလို သိရတာလို့ မိသားစုက ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစုအပါအဝင် ကျေးရွာခံတွေလည်း မကျေနပ်ကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကိုချစ်စမ်းမောင် တပ်က ထွက်ပြေးပြီး ပုန်းအောင်းနေစဉ် သူ့ဇာတိရွာကို စစ်တပ်ကလာ စစ်ဆေးစဉ် ကျောင်းကုန်းမြို့အပိုင် ပေါက်ဆိန်ဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မိခဲ့တာပါ။ ကိုချစ်စမ်းမောင်နဲ့ ဆွေးမျိုး တော်စပ်သူတဦးက ခုလိုပြောပါတယ်။
“ဒီကလေးက အသက် ၂၅ နှစ်။ အဲ သူ ဖမ်းလာတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းတယ်။ အဲဒါ တပ်ထဲကို ၂၉ ရက်နေ့ အဖမ်းခံရပြီးတော့ ၂ ရက်နေ့ ၉ လပိုင်း ၂၀၁၀ မှာ မနက် ၇ နာရီခွဲမှာ သေဆုံးတယ် ဆိုပြီးတော့ တပ်ရင်းက ဟို စာနဲ့ပေါ့၊ ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌကို အကြောင်းကြားတာ။”
အကြောင်းကြားစာရရှိတဲ့ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင် ဒီကိစ္စကို ကျေနပ်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“မကျေနပ်ကြဘူး၊ အခုလို ဆုံးသွားတာကို၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင် ဟို စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြီးသွားမယ် ဆိုပြီးတော့ ဟို လက်ထောက်ချလိုက်တာပေါ့။ ဖမ်းလို့ရပါတယ် ဆိုပြီးတော့ လက်ထောက်ချလိုက်တော့ အဲဒီက တပ်က ဗိုလ်ကြီးက သွားဖမ်းတာ။ အခု ဒီလိုလည်း ဆုံးသွားရော အဲလို ဖမ်းပေးတာ မှားသွားတယ် ဆိုပြီးတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြတာ။”
တပ်က ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့တဲ့ စာမှာ သေဆုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယားနာကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ကူးလို့ သေဆုံးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူ တပ်သား ချစ်စမ်းမောင်ဟာ ခလရ ၃၆ က ကိုယ်ပိုင်အမှတ် တ၂၅၉၆၇၆ ဖြစ်ပြီး ကျုံပျော်အပိုင် မိချောင်းအိုင်ရွာကပါ။ အဖ ဦးစံလေးနဲ့ မိခင်က ဒေါ်မြင့်မြင့် ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ၀ိုင်းတော်သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ် မေးမြန်း တင်ပြ ထားပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 8:39 AM
VOA |၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ(၁၈)ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားက အာဏာလွန်ဆွဲမှုတွေ နဲ့၊ ၁၉၉၂ ဧပြီလမှာ “နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့” ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကို ကျန်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး၊ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်က ဗီအိုအေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား”အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ၊ ဦးအောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ပြောစကား နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ဦးရော် နီညိမ်းက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ် ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ စစ်ရုံးမှာရှိတဲ့ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး၊ နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ပေါ့လေ။ နောက်တစ်ယောက်က (ဒုတိယ) ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင် သန်း (စစ်ဦးစီးမှူး - ပထမတန်း) G-1 ပေါ့။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကော၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း (နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင် သန်း) ကိုကော ကြည့်မရပါဘူး။ ကြည့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ အင်မတန်မှ closed ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်က “တင်ဦးကို ငါ စစ်ရုံး မှာ မမြင်ချင်ဘူး” ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးက ဘယ်သူမှ ရာထူးမပေးဘဲ နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ကစထမှူး (ကစထမှူး= ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး။ စစ်တိုင်းများ နှင့် အရပ်ဘက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးများကို တိုင်းမှူးများအထက်မှ ကွပ်ကဲရသောစစ်ရာထူး) ဆိုပြီး တော့မှ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှ ရှောင်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း၊ သူဆိုရင်လည်း စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (ကက(ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးဌာန G-1 ကနေ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(ကြည်း) အဖြစ် ရာထူးတက်ခဲ့ပြီးနောက်) ကနေ၊ “မင်းသွား ခင်မောင်သန်း၊ တပ်မ(၅၅)ဒုတပ်မမှူး” ဆိုပြီးတော့မှ မောင်း ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အခါတုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့အထက်က ဦးစီးချုပ်ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ သူက မကျေနပ်ပေမယ့် ငြိမ် ခံနေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ ကျနော် ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုပြောရသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းနည်းပြအရာရှိပေါ့လေ၊ ဒီကကလှမ်း (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး) နဲ့တော့ အမြဲ သွားဟယ်လာဟယ် အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အနားမှာနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးတို့၊ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်စိုး (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိများ) တို့ဆိုတာ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ကျနော်တို့က အမြဲတမ်း ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ကျနော် ကကလှမ်း ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ပိုသိရပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ ဟိုဘက်၊ ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကို ခုန်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခြံထဲဝင်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ကိုရော်နီသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ အခု ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်တို့ရဲ့ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး”တို့ ဘာတို့၊ ဒါတွေက ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်အခါမှာ “သူတို့ အာဏာတောင် မရသေးဘူး၊ အခုကတည်းက လာပြီးတော့၊ ဘာမို့လို့လဲကွ” ဆိုပြီး ဖြစ်ကြတာကိုး၊ အဲဒီအချိန်ကပေါ့ဗျာ။
(ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်တို့ရဲ့ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး” = ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်၊ ပါတီဥက္ကဌ တာဝန်ယူထားသည့် ကွယ်လွန်သူ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်က၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး နာဇီဂျာမန်ခေါင်းဆောင်များအား စစ်နိုင်မဟာမိတ်နိုင်ငံများက၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံ နုရင်ဘတ်မြို့(Nuremberg) တွင် စစ်တရားခုံရုံးတင်ပြီး စစ်ဆေးအပြစ်ပေးသကဲ့သို့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်၍ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့အား၊ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး”ကဲ့သို့ ခုံရုံးတင်စစ်ဆေး အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်ကောင်းလုပ်ဘွယ်ရှိမည် ဟု၊ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုခဲ့သည့်ကိစ္စ)
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီအချိန်အခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနေရာကို ဘယ်သူများရမလဲ ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေက ကျနော်တို့ စစ်ရုံးထဲမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ သံတမန် တွေကြားထဲမှာကော အရပ်သားတွေ ကြားထဲမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သိန်း (ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်၏အထက်မှ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ‘မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေး’ ဌာနမှူး) တို့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မှ ဒီသတင်းတွေကို ကျနော် ပို့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ သံတမန်တွေဆီက သတင်းတွေ ဗျာ။ အထူးသဖြင့်တော့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပေါ့၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ကျနော် တခါ ၀င်သတင်းပို့ရပါတယ်။ သတင်းပို့တဲ့အခါ “ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အပေါ်ကိုတော့ ဒီ သတင်းတွေ ဒီသတင်းတွေ ဖြစ်နေပါတယ်”ဆိုတဲ့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပါပဲ။ ကျနော် တို့က အဆင့်အများကြီး ကွာတဲ့အခါကျတော့ ၀င်သတင်းပို့တယ်။ ပို့တဲ့အခါကျတော့ ကျနော့်ကို သူ မော့ကြည့်လိုက်တယ်၊ မော့ကြည့်ပြီးတော့မှ “အောင်လင်းထွဋ် မင်းဘယ်လိုထင် လဲ” ဆိုပြီးမေးတော့ ကျနော်တောင်မှ “ကျနော်မသိပါဘူး” ဆိုပြီးတော့ ပြောရတယ်။ သူ့ကို Second Man အနေနဲ့ ပေးလိမ့်မယ်၊ ထားလိမ့်မယ်လို့ သူ လုံးဝမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ် ဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ သူကိုယ်တိုင် feeling ဖြစ်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် စစ်အာဏာသိမ်းချိန်က ဖြစ်စဉ် နဲ့ ၁၉၉၂ ဧပြီလ မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်တို့ ဦးဆောင်ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်က “နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့” တစ်ဖွဲ့လုံး စိတ်တူ သဘောတူ ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်း ဗိုလ်မှူးအောင်လင်း ထွဋ် ရဲ့ ပြောစကားတွေကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး တင်ဆက်ခဲ့တာပါ ခင်ဗျာ၊ နောက်သီတင်းပတ် စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ မှာတော့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကာလမှာ ပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့ ခြေမြန်တပ်မ (၂၂) လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ်ရင်း တစ်ရင်းက တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးဟောင်း စိုင်းဝင်းကျော်ရဲ့ ပြောစကားတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါ၊ ကျနော် ရော်နီညိမ်း ပါ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကျောင်းသား လူငယ်များ...
ဒဂုံ နှင့် မှော်ဘီ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများအား ဥပဒေ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထ်ိမ်းအမ...
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ရခိုင် ၄ မြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်...
ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို C...
တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးမှာ မြန်မာအစိုးရ အမြတ်ထွက်တယ်